आमाको चुल्ठो | मझेरी डट कम
“अचेलका कुराहरू बिर्सन थाली, पुराना कुरा सबै याद छ ।” बाबाले बताउनु भयो र आमालाई जिस्क्याउँदै भन्नुभयो, “ए देखि जेडसम्म भन त भारती” । आमा रिसाउनु भयो, “यस्ता त प्रिन्सिपल छन् ....” आमाले खररर भनिदिनु भयो । एउटै स्कुलका प्रिन्सिपल, शिक्षिका र विद्यार्थी थियौँ हामी । आमा रिसाए पनि बाबाले अँझै जिस्क्याउन छोड्नु भएन । “ ल त्यहाँबाट जुरुक्क उठ त अनि मात्रै हामी पत्याउँछौँ तिमीलाई केही भएको छैन भनेर ।” आमा आवेशमा आउनु भयो । गलैचामाथि ओछ्याइएको चकटीबाट उठ्ने प्रयासगर्नुभयो, सक्नु भएन । तैपनि अँझै हिम्मत हार्नु भएन । दुवै हात टेकेर उठ्ने प्रयास गर्नुभयो । डम्म फुलेको भद्दा शरीर र खराब स्वास्थ्यले उहाँलाई साथ दिएन, पल्टनु भयो । आमा र म हाँस्यौ तर अन्य सबै जना गम्भीर हुनुभयो । लड्दा आमाले लगाउनुभएको पातलो उनीको टोपी फुस्कियो । दुई पटक चिरिएको टाउकाको खतहरू र किमोको कारणले झरेर भर्खर पलाउन सुरु गरेका कपालहरू आमाका टाउकामा कतै कतै झुप्पा झुप्पा मात्रै थिए । मास्तिरबाट निधारतर्फ झरेका एक झुप्पा कपालले घोडाको टाउकाको झल्को दिन्थ्यो । पहिले मेरी आमाको स्वरूप यस्तो थिएन ।
एक दिन आमाका रिपोर्ट देखाउन बाबासगै म पनि पुगेको थिए डाक्टरको क्लिनिकमा । आमाको ब्रेन ट्युमरको दोस्रो पटक अप्रेशन गर्ने तयारी हुदैँ थियो । डाक्टरका सबै कुरा मैले बुझिन । एउटा कुरा चाहिं मैले पनि बुझ्ने गरी सम्झाएका थिए डाक्टरले । ‘.... जरा निकै फैलिसकेको छ । उखेल्न सम्भव छैन । माथि माथि खुर्कने हो । त्यसो गर्दा काटेर छोडेको घाँसको बुटोझैँ झनै झाङ्गिएर आउँछ ।..... पहिलो अप्रेशनले त कमसे कम दुई वर्ष काम गर्यो अब त्यति पनि धाान्दैन । .... गर्ने नै भन्नुहुन्छ भने अस्पतालमा गएर डेट लिनुस् । म गरिदिन्छु ।
“.... लामा चुल्ठा भएको पाए लाउँछु । नत्र लाउन्न ।” बाबाले धेरै ठाउँ डुलेपछि बल्ल बल्ल फेला पारेर ल्याउनु भएथ्यो यो कपाल ।
जनै पूर्णिमापछि आमाको अवस्था झन झन खस्किन थाल्यो । बिस्तारै आमाले पूरै होस गुमाउनु भयो र पछि दृष्टि पनि । आमा अचेत मुडोझै लड्नुभयो । बाबुको मुख हेर्ने दिनको आसपास थुप्रै दुनामा पैसाहरू र केही टपरीमा चामल हालेर पूजा सामग्रीहरू मिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो हजुरआमा । आठ दश जना ब्राम्हणहरूसँगै हुजुरबा आगनमा उभिनुभएको थियो । आमालाई बरण्डामा सुताइएको थियो । म स्कुल जान झोला बोकेर आँगनको डिलमा मात्र पुगेको थिए, आमाले चर्को स्वरमा बोलाउनुभयो, ‘अभियान ?’ म टक्क रोकिएँ । “खाली खुट्टा नहिड् बाबु ! ....... जुत्ता ला ।” मैले घर बाहिर खाली खुट्टा नहिडेको दुई तीन वर्ष भैसकेको थियो । म हाँस्दै स्कुलतर्फ लागेँ । म फर्कदासम्म आमालाई अस्पताल लगिसकिएको थियो ।
त्यस दिनपछि आमालाई मैले देख्न पाइनँ । तिजको दिन बाटाभरि राता पहिरन लगाएका महिलाहरूको हुल शिव मन्दिरतर्फ जाँदै थियो । हजुरआमा मलाई लिएर अस्पताल जानुभयो । हजुरआमा हरियो गाउन लगाएर आमालाई भेट्न न्युरो आइसियु लेखेको कोठा भित्र पस्नुभयो । आँखा पुछ्दै निस्कनुभएकी हजुरआमाले मलाई प्रश्नभन्दा बढी अनुरोधको शैलीमा सोध्नुभयो, “....तँ पनि जान्छस् ?” सायद मृत्युसँग पौँठेजोरी खेलिरहेकी मेरी आमाको अन्तिम दर्शन मलाई गराउन चाहनुहुन्थ्यो हजुरआमा । “... नाई ! म जान्न । ...डर लाग्छ,” मैले अस्वीकार गरेँ ।
आमा नरहनु भए पनि आमाको यो चुल्ठो लामो समयसम्म लुगा झुण्ड्याउने ह्यङ्गरमा झुण्डिरह्यो । आवश्यकताको बस्तु नभएकाले यस्लाई कसैले चासो राखेनन् । क्रुर समय मलाई नयाँ आमा दिन तयार भयो । ‘बाउको बिहे हेर्न हुन्न छोराले...’ कसैले हकार्यो । म लुरु लुरु स्कुल गएँ । बेलुका आउँदा मेरो लागि छुट्टै कोठा तयार थियो । बाबुसँगै सुत्ने मेरो अधिकारमा पूर्णबिराम लागेको जानकारी गरायो, मलाई त्यो कोठाले । आमाको सम्झना दिलाउने त्यो ड्रेसिङ टेबल मेरो कोठामा सारिएको थियो । त्यसलाई खोलेर हेरेँ । आमाले नक्कली चुल्ठो लगाएका कान्छी फुपूका बिहेका केही फोटा चेपमा दबिएका रहेछन् । झट्ट आमाको चुल्ठो याद आयो । बिरालाको चालमा गएर त्यसलाई लिएर आएँ । त्यस रात म आमाको चुल्ठो टाउकामा लगाएर फोटो हेर्दै ड्रेसिङ टेबल अगाडि बसेर अबेरसम्म रोइरहेँ । मेरा आँखाबाट बगेका आँसुहरूले मलाई मेरा आफन्तहरूको झुण्डबाट बगाएर अन्तै कतै मिल्कायो । आफन्तहरुको झुण्ड र मलाई एक आपसमा आकर्षण गर्ने गुरुत्वको भूमिका निभाउने मेरी आमाको ठाउँमा नयाँ आमा आउनुभएको थियो । नयाँ आमामा गुरुत्वाकर्षण शून्य थियो । नयाँ आमासँग अनुहार नमिलेपछि म सदा भाग्यमानी छोरो रहिरहन सकिनँ । त्यति बेलाबाट मलाई पूर्ण आभास भयो कि मेरी आमा साँच्चै जीवित हुनुहुन्न, अब कहिल्यै यो धर्तीमा फर्केर आउनु हुन्न ।